လမ်းလေးရဲ့ခရီးက ပို့စ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်နဲ့အတူ ၁ နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ Happy Birthday ပါ။
နောင်နှစ်တွေကိုလည်း ပို့စ်တွေရေးရင်း ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ. ။အမြဲတမ်းအားပေးနေမှာပါ ကိုစေးထူးရေ။
Sep 14, 2007, 11:26:00 PM
ကိုကြီးစေးထူးရဲ့ ဘလော့ ဂ်သားလေး တစ်နှစ်ပြည့် ကနေ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အဓွန့်ရှည်လို့ စာတွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေနော် ထာဝရ ပရိတ်သတ်လေ မုံ့ကျွေးနော်..နော်
Sep 15, 2007, 12:06:00 AM
Sep 15, 2007, 12:19:00 AM
တစ်နှစ်ပြည့် လမ်းကလေး ပန်းတိုင်အထိ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
Sep 15, 2007, 12:30:00 AM
In the end, the truth shall prevail. Keep up your good work.
P.S. I am following "လူငယ်တဦးရဲ့ မှတ်တမ်းမဲ့ မှတ်တမ်း…". Please keep posting :) :) Can't wait :) :)
Sep 15, 2007, 12:49:00 AM
နှစ်ပတ်လည် အတွက်..၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဘလော့စရေးတဲ့ အချိန်ကနေ ခုထိ ပြောင်းလဲမူတွေ တွေ့လာကြတာပဲမဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ ဆက်ရေးကြမယ် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ အချိူးအကွေ့တွေ..ရလဒ်တွေ ကိုမျှော်လင့်ကြမယ်။
Sep 15, 2007, 1:33:00 AM
သူ့ ဘ၀ရဲ့ စာမျက်နှာတစ်ချို့ ….
သူ့ ဘ၀ရဲ့ ဒါဏ်ရာတစ်ချို့ …
သူ့ ဘ၀ရဲ့ အသိ တစ်ချို့ …
သူ့ ဘ၀ရဲ့ ဒဿန တစ်ချို့ …
သူ့ နှလုံးသား ရဲ့ ရသ တစ်ချို့ …
လမ်းကလေးထက် စီရီခင်းကျင်းလို့ …
တင်ထားတဲ့ ပို့ (စ)တွေ
လမ်းကလေး ရဲ့ ..မင်္ဂလာနှစ်သစ်တွေ
Sep 15, 2007, 2:22:00 AM
တနှစ်ကနေ ၂နှစ်ပေါ့ 
Sep 15, 2007, 2:49:00 AM
ဒီနှစ်ပြီး နောက်နှစ်... နောက် တစ်နှစ်ပြီးရင် နောက်ထပ်... နောက်ထပ်...
Sep 15, 2007, 8:13:00 AM
ကိုစေးထူး ကဗျာလေးကို ကြိုက်တယ်။ ရင်ဘတ်နဲ့ ခံစား သွားပါတယ်။
Sep 15, 2007, 9:33:00 AM
ကိုစေးထူးရဲ့ ဘလော့ဂ်လေး တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ မွေးနေ့ပွဲများကို စင်နွဲနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်၊ အမြဲအားပေးနေပါတယ်
ပျော်ရွှင်ဘွယ်ရာ ဘလော့ဂ်မွေးနေ့ပါ ကိုစေးထူးရေ..
Sep 16, 2007, 3:00:00 AM
ကိုစေးထူးကြီး ၁ နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာ
Sep 16, 2007, 3:12:00 AM
Sep 16, 2007, 3:33:00 PM
ကျနော့်ကို အားပေးထားကြတဲ့ မက်ဆေ့လေးတွေကို ကြည့်ပြီး အရမ်းပဲ ကြည်နူးအားတက်ရပါတယ်။ ကိုမောင်ရင်ရဲ့ ကဗျာကိုလည်း ကျနော် သေသေချာချာ သိမ်းထားပါမယ်။ အမှတ်တရပေါ့။ ကျနော် ကြိုးစားပါအုံးမယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Sep 17, 2007, 4:01:00 PM
တနှစ်ပြည့်အတွက် အားလုံးရဲ့ နောက်ဆုံးမှ ဆုတောင်းလိုက်မယ် ... (ဘယ်သူမှ ထပ်မရေးကြေး .. :P )
တနှစ်ပြည့် ဘလော့ဂ်မှသည် ... နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် မြဲမြံခိုင်ကျည်ပါစေ... ။
ဤဘလော့ဂ်၏ အရှင်သခင်သည်လည်း ....
ဟိုးရှေ့မှာရှိတဲ့ ပန်းတိုင်ဆီကို အားစိုက်ပျံနေသော ငှက်ကလေးတွေပမာ ...
ပန်းတိုင်မရောက်မခြင်း မလျှော့သော ဇွဲနဲ့ အမြဲတမ်း ပျံသန်းနိုင်ပါစေ ... ။
ဖြောင့်ဖြူးသော လမ်းကလေးပမာ ... ဘ၀ခရီးလမ်းတလျှောက် ဆူးညောင့် ခလုတ်များ ကင်းဝေးကာ ဖြောင့်ဖြူးသာယာနိုင်ပါစေ ... ။
စိမ်းလန်းသော သစ်ပင် သစ်ရိပ်တွေပမာ ... သာယာအေးမြ ငြိမ်းချမ်းသောဘ၀ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ... ။
အခုမှ ၀င်ကြည့်မိတော့ အခုမှသိတယ် နောက်ကျပြီးမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး
Sep 23, 2007, 4:21:00 AM